I-Landscape Design | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba I-Landscape Design
Konke okudingayo ukwazi ukukhula gelenium
I-Gelenium inezici eziningi kakhulu. Lesi sitshalo singummeli womndeni weCompositae futhi sitholakale kumasiko kusukela ngo-1635. Nokho, imbali yaqala ukuchazwa emsebenzini kaKarl Linnaeus ngo-1755. Zonke izitshalo zalezi zinhlobo zingaba nokuphakama okuhluke ngokuphelele kwehlathi, futhi kuye ngokuthi ezihlukahlukene, zihluka kusuka ku-30 ​​kuya ku-150 cm.
Izinhlobo nezinhlobo ze-stevia
I-stevia ehlala isikhathi eside isetshenziswa ngokuyinhloko kumklamo we-landscape. Ikhula isikhathi eside, igcina ukuhlobisa kuze kube sekwindla. Ukunakekelwa kungenakuzithoba, akudingi ama-garters futhi uyakwazi ukujabulisa ngisho nomuntu obala izimbali enemibala egcwele. Inkinga ngesitshalo ivela kuphela phakathi kwe-nerds, engaqunyiwe nganoma iyiphi indlela ngokuhlukaniswa kwezinhlobo zazo.
Hlangana nezinhlobo ezidumile ze-larch
I-Larch ingenye yezinto ezivame kakhulu zezihlahla ze-coniferous. Ubungowomndeni wephayini. Lesi sitshalo sivame ukutholakala emahlathini, ezintabeni, ezindaweni zokupaka. Ngaphezu kwalokho, kungaba yingxenye emangalisayo yokuhlobisa kwensimu yakho. Lolu hlobo aluzuzisi nje kuphela ngobuhle balo, kepha futhi luhlala luqinile, luphikisana nezinkuni ezibolayo.
Isitshalo esibizwa ngokuthi i-yarrow singokomndeni we-compositae (Compositae). Ikhula endaweni ye-climatic and temperate ye-northern hemisphere. Kunezinhlobo ezingaba yikhulu ze-yarrow engapheli. Ingxenye yeshumi yalezi zinhlobo ezisakazwa emazweni angaphandle. Kubalulekile! Ngenxa yokukhiqiza okusebenzayo ngokuzihlwanyela, ama-yarrow inflorescences anamafutha asuswe kahle - isitshalo ngokuvamile sibonakala njengokhula, nakuba sinemithi yokwelapha.
Ukukhula esakhiweni: ukutshala ezitsheni nokunakekelwa ensimini
I-Levka iyimifino yokuhlobisa enephunga elimnandi, eliyiminyaka eminingi lihlotshiswe ngamapaki omphakathi kanye namasimu. Izimbali zalo ezinemibala eminingi zifana ne-purple violet. I-levka ingaba isitshalo esisodwa, sesibili noma esingapheli, izinhlobo ezingaphezu kwezingu-20 ze-levkoy ziyaziwa. Ukutshala i-leukova ngokusebenzisa izithombo. Ngakho-ke, isitshalo se-left-wing isitshalo se-ornamental noma isitshalo sepaki, esivame ukukhula ngakwesokunxele, okuyinto abalimi abaningi abazi njenge-mattiola.
Indlela yokwenza ukusakaza okumile ezweni?
Kungekudala, ekhulwini lama-20 leminyaka, kwavela umbono omusha, ukuphakama kwawo okukhula ngokushesha emazweni amaningi emhlabeni jikelele. Kuphathelene nomklamo wezwe. Ngokwemibandela elula, lokhu kukuhlelwa phansi nokuhlelwa komhlaba. Ngomqondo obanzi, kuyindlela yobuciko lapho ubuciko, ukuklama kanye nokwakhiwa kuhlanganiswa.
Indlela yokwenza rockeries ngezandla zakho
Akuzona zonke izakhamuzi zasehlobo ezithanda ukuzitholela insimu noma ingadi. Kukhona abanikazi bezindawo zasemadolobheni, futhi baningi labo abathanda ukuchitha isikhathi sabo samahhala emgodini wemvelo, hhayi ukuyihlakulela, kodwa bajabulele ubuhle obukhona. Bangacelwa ukuba bahlele ama-rockeries, angenziwa ngisho ngesandla, endaweni yabo ye-dacha noma yezwe.
Indlela yokwenza i-gabions ngezandla zakho
Emklamo wamanje we-landscape, amasu amasha nezindlela ezintsha zivela njalo ukuze zihlobise igceke le-cottage ehlobo. Okwamanje, ama-gabions athandwa kakhulu, okuyinto abakhi bemvelo abasebenzisa hhayi nje kuphela njengomhlobiso, kodwa futhi njengento eyinhloso ewusizo. Kungase kubonakale ukuthi into enjalo yokuhlobisa ayinakwenziwa ngesandla, njengoba isakhiwo esiyinkimbinkimbi esidinga ukuchithwa nokuxoshwa.
Ukwakha umthombo kuleli zwe ngezandla zabo
Noma yimuphi umnikazi ukubukeka kwedacha noma igceke kubaluleke kakhulu. Umklamo wayo ungaphathwa yizazi, kodwa, uma uthanda, ungenza lokhu ngokwakho. Umthombo uyoba umhlobiso omuhle wegceke noma isakhiwo. Kungakhiwa ngezandla zakho siqu kuphrojekthi yakho. Izinhlobo zemithombo Imithombo yokupha ingaba yizinhlobo ezahlukene.
Dala i-waterfall ngezandla zakho ukunikeza
Iphupho labanikazi abaningi be-cottage noma indlu yangasese liyizibi eliphethe amanzi. Umhlobiso onjalo uguqula futhi uvuselele isayithi, ungeze izithelo zomisiwe, uphinde uvuselele ezinsukwini ezishisayo zasehlobo. Imvula yamanzi ehlobisa ingaba encane futhi ifanele ngisho nasendaweni encane. Ukwakhiwa kwayo kulula kunalokho okungase kubonakale: ukuze udale ukwakhiwa ngezandla zethu, kuzodingeka uthenge izinto zokwakha futhi ulandele izincomo ezinikezwe zona.
Ukuhlelwa kwemvelo e-cottage yabo ehlobo ngezandla zabo, izitayela, izakhi zokuklama
Umklamo we-landscape ubili ubuciko nenqubo egxile. I-landscape yasekhaya ehlelwe kahle yenza kahle futhi isebenze kahle, idala isikhala esingaphandle, ithuthukise indawo, futhi inganciphisa izindleko zokushisa nokupholisa indlu. Inqubo yokuhlela yeday design, enye yezinto ezibaluleke kakhulu ekuthuthukiseni ikhaya, ivame ukunganakwa.
Kuze kube manje, kunezinguquko eziningi ezihlukahlukene zemiklamo yomlilo yasekuqaleni, okuyi-dacha isebenza njengendlela yokusebenzisa imfucuza yamanzi, futhi indawo epholile emoyeni omusha, futhi isici esibalulekile ekuhlobiseni indawo yezwe. Abaningi bafuna ukuhlomisa izinto ezinjalo zezwe ngezandla zabo ngosizo lwamathuluzi atholakalayo.